नेकपाको अन्तरद्वन्द्वले मुकेश चौरसियाको लियो ज्यान (अन्तरवर्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » नेकपाको अन्तरद्वन्द्वले मुकेश चौरसियाको लियो ज्यान (अन्तरवर्ता)
नेकपाको अन्तरद्वन्द्वले मुकेश चौरसियाको लियो ज्यान (अन्तरवर्ता)
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको अन्तरद्वन्द्व प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि केपी शर्मा ओली पक्षका प्रदेश सांसदहरुले अविश्वासका प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो । त्यसलाई जसोतसो थामथुम पारिएको छ तर विवाद समाधान भएको छैन । त्यस्तै प्रदेश २ को पर्सा जिल्लाको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा भएको पार्टी भित्रको झडपले एकजनाको ज्यान गएको छ । अर्थात पार्टीभित्र देखिएको विवादले द्धन्दका रुप लिँदैछन् । यसले भोली गएर कस्तो रुप लेला भनि भन्न सकिदैन । विन्दावासिनी गाउँपालिकामा भएको झडपमा मुकेश चौरसियाको ज्यान गएको छ तर पीडित पक्षले जाहेर दिँदा प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन । अन्ततः प्रदेश २ का नेकपाका केही नेताहरुले दवाव दिएपछि जाहेरी दर्ता गर्यो । दर्ता भएपछि मात्र आफ्न्तल शव बुझेर कात्तिक १४ गते दाहसंस्कार गर्यो । प्रस्तुत छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश २ का सहइन्चार्ज महेन्द्र पासवानसँग सहारा टाइम्सले गरेको कुराकानीः
पर्साका मुकेश चौरसियाको हत्यालाई लिएर प्रदेश २ मा नेकपाभित्रको विवादलाई छताछुल्ल पारेको छ, साँच्चै पार्टीकै आन्तरिक विवादको प्रतिफल हो त्यो ?
–सबै कुरालाई अध्ययन गर्दै गएपछि यो घटना योजनवद्ध गराइएको हो कि बुझिन्छ । मुख्य कुरा केन्द्रमा पार्टीको अन्तरविरोध र त्यसको प्रभाव प्रदेश २ सम्म देखिनुले पर्साको घटना भएको हाम्रो बुझाई रहेको छ । प्रदेश कमिटीले अहिलेसम्म कुनै पनि गतिविधि गरेको छैन । प्रदेश कमिटीको सपथग्रहण बाहेक अहिलेसम्म बैठक नै बस्न पाएको छैन । अहिलेसम्म न कार्यविभाजन भएको छ न सचिवालय गठन भएको छ । प्रदेश अन्तर्गतको जिल्ला कमिटीहरु पनि विवादमै छन् । जिल्ला कमिटी विधान विपरित गठन गरेको हुनाले ती कमिटीहरु विवादमा रहेका छन् । पार्टी सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई जिल्ला कमिटीमा हालेका छन् तर पार्टीका लागि बलिदान तथा योगदान दिने व्यक्तिलाई राखेको छैन । साथीहरुको सही मूल्यांकन भएको छैन । अहिलेसम्म स्थानीय निकाय पनि गठन भएको छैन । मुकेश चौरसियाको घटना प्रदेश कार्यालयबाट गर्न लगाएको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेसम्म प्रदेशका अध्यक्ष र सचिवले मुकेश चौरसियाको घटनालाई लिएर कुनै प्रतिकृया जनाउनु भएको छैन । एउटा आधिकारिक विज्ञप्ति पनि आएको छैन । त्यसले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।
तपाईले भन्नु खोज्नु भएको हो कि यो घटना प्रदेश २ को पार्टी कमिटीको षड्यन्त्रणमा गराइएको हो ?
–घटनाक्रमले त त्यही बुझिन्छ । प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र सचिव अहिलेसम्म यो घटनाको बारेमा आफ्नो मौनता किन तोड्नु भएको छैन । सही र गलत के हो त्यो अहिलेसम्म भन्न किन सक्नु भएको छैन । जब कि यो घटनालाई लिएर प्रदेश २ का अधिकाँश पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुले आआफ्नो कुरा राख्नु भएको छ । विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको छ । संघर्षमा सहभागी हुनु भएको छ । तर प्रदेश २ का पार्टी अध्यक्षको अत्तोपतो छैन । यो कुरा के हो सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
प्रदेश २ कमिटीको इशारामा यो घटना गराइएको हो भन्नुभयो भने पार्टीले यसको बारेमा के भनेको छ, पार्टीले यसको विषयमा के गरिरहेको छ ?
–पार्टी अहिले पार्टी कुन अवस्थामा सबैलाई थाहै छ । केन्द्रकै आन्तरिकद्धन्दको प्रभाव प्रदेशसम्म परेको र यस्तो घटना हुन गएको हो । पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अहिले पनि केही विग्रेको छैन । यदि अहिले पनि पार्टी एकढिक्का भएर जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार काम कारवाहीलाई अगाडि बढायो भने अगामी निर्वाचनमा फेरि पनि जनताले नेकपालाई नै मन पराउँछन् । पार्टीको विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सरकार र पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर एकपक्ष एकलौटी रुपमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । तर अध्यक्ष प्रचण्डले सामूहिक नेतृत्वमा संगठनलाई चलाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ । यिनै द्धन्दका बीचमा पार्टी फँसेको छ । यो द्धन्दको असर समग्र पार्टीमा परेको छ । प्रदेश तथा जिल्लामा देखिएको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी संगठन विभागलाई दिएको थियो तर पार्टी आन्तरिक द्धन्दमा यसरी फँसेको छ कि देखिएको विवादलाई समाधान गर्न सकिरहेको छैन । केन्द्रको अन्तरद्धन्दको फाइदा लिएर प्रदेशले जिल्लामा यत्रो ज्यानै जाने गरि घटना गरायो तर प्रदेशको कार्यकारी पदमा बसेकाहरु कुनै प्रतिकृया देखाउनु भएको छैन ।
होइन, पार्टीमा यत्रो विधि अन्तरद्धन्द छ जसले एकजनाको ज्यानै लियो त ?
–तपाईले पनि पर्साको घटना थाह पाउनु भएको होला नि । पार्टीको अन्तरद्धन्दका कारण झगडा भएको हो । र, त्यो झगडामा एकजनाका ज्यान गएको हो । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि ेपार्टीमा कस्तो अन्तरद्धन्द छ । घटना दुखद हो, सबैलाई मर्माहत बनाएको छ । जसले जहाँबाट यस्तो अपराध गरेपनि दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । दोषी उम्किनु हुँदैन भने हाम्रो माग रहेको छ । पार्टी एउटा विधि र प्रकृयाबाट चल्नुपर्छ । कुरा मिलेन भने आन्तरिक रुपमा बसेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यो कुरा पार्टी नेतृत्वबाट हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो नगरेर पार्टीमा झन द्धन्द बढाउने काम भएको छ ।
केपी शर्मा अ‍ोली र प्रचण्डबीचको अन्तरद्धन्दकै असर हो त वीरगञ्जको घटना ?
–पक्कै पनि अवस्था त्यस्तै देखिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरद्धन्द रहन्छन् नै । त्यो रहनु पनि पर्छ । तर अन्तरद्धन्द स्वच्छ हुनुपर्छ । त्यसलाई गलत ढंगले प्रयोग गर्नुहुँदैन तर नेकपामा अन्तरद्धन्दको गलत फाइदा उठाई रहेको छ । अपराधिक मानसिकताले गर्दा यस्तो घटना भएको हो । पार्टीभित्रको अन्तरद्धन्दलाई पनि ठिक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ । बहस र छलफल भएपछि मात्र एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ तर मर्ने र मार्ने अवस्था सृजना गरेको पार्टीमा । जुन खेदजनक छ । यसरी पार्टीको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन ।
यो घटना भएकै दिनदेखि तपाईहरु न्यायका लागि संघर्षमा उत्रिनु भएको छ, हिजो (कात्तिक १४) मात्र मुकेश चौरसियाको दाहसंस्कार गर्नुभयो, वास्तवमा त्यहाँको घटना भयो कसरी ?
–स्थानीय तहको अन्तरद्धन्दले यस्तो घटना भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई । स्थानीय तहमा पार्टी समायोजनको काम सकेपछि सपथग्रहणको कार्यक्रम चलिरहेको थियो । अर्को असन्तुष्ट पक्ष त्यहाँ गएर हुलदंगा गर्दै मारपिट गर्न थालेको थियो । कार्यक्रममा किन बोलाइएन भनि त्यो समूहको असन्तुष्टि थियो रे । जब कि अर्को पक्षले कार्यक्रमको बारेमा सबैलाई जानकारी थियो । उनीहरुले निहुँ खोजेर झगडा गर्न मात्र आएको भनेको छ । वास्तविकता के हो त्यसको छानविन हुन आवश्यक छ ।
मुकेश चौरसियाको हत्या कसरी भयो त ?
–सपथ ग्रहण कार्यक्रम चलिरहेको थियो । अर्को पक्ष गुण्डा शैलीमा आएर जथाभावी कुटपिट गर्न थाल्यो । लाठी र भाठाका साथमा आएका थिए उनीहरु । जथाभावी गुण्डाको शैलीमा कुटपिट गर्न थालेपछि मुकेश चौरसियाले किन झगडा गरेको के भयो भन्दै बाहिर निस्केपछि सबैजनाले उहाँलाई नै घेराहाली कुटपिट गरेको थियो । मरनासन्न हुने गरी कुटेर बाटैमा छाडेर भागेको थियो जुन कुरा भिडियोमा पनि हेर्न सकिन्छ । घटना योजनावद्ध तरिकाले कसै नकसैको इशारामा भएको कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
जसले आक्रमण गरेका छन् ती सबै नेकपाकै कार्यकर्ता हुन् त ?
–उनीहरु सबै नेकपाका कार्यकर्ता होइन । उनीहरु अपराधी मानसिकता बोकेका मानिसहरु हुन् । कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेताले यस्तो गर्न सक्दैन । यस्तो काम नेताको आडमा, पार्टीको आडमा गुण्डाहरुले गर्ने हो । यो घटना कसरी भयो, यो घटना कसले गराइएका हो, कसको इसारामा भएको हो यी सबै कुराको छानविन हुनुपर्छ र त्यसका लागि एउटा उच्च स्तरीय छानविन आयोग नै गठन गर्नुपर्छ । अनि मात्र सत्यतथ्य बाहिर आउँछ ।
घटना भएपछि दोषीलाई कारवाहीका लागि जाहेरी दर्ता गराउन यत्रो विधि सघर्ष गर्नुपर्यो अब सत्यतथ्य छानविन होला र दोषीमाथि कारवाही सजिलो तरिकाले होला भनि तपाईलाई विश्वास लाग्छ ?
–दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै उसका आफन्तले जाहेरी दर्ता गराएका छन् । पीडित पक्षले दिएका जाहेरी दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरुले संघर्ष गरेको हो । त्यसका लागि प्रदेश २ का अधिकँश केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेर एउटा व्यक्तव्य जारी गरेका थियौं । दोषी को हो त्यसले सजाय हुनुपर्छ भनि हामीले माग गरेका छौं । यो घटनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कतै नकतै प्रहरी प्रशासनको पनि मिलोमितो रहेको हामीलाई लागि रहेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख पनि कसैको नकसैको प्रभाव परेको देखिन्छ नत्र प्रहरी शुरुदेखि एलर्ट भएको भए यस्तो घटना हुने थिएन । कार्यक्रम हुँदा जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई यस्तो खालको घटना हुनसक्छ हैं, सुरक्षा कडा पार्नुपर्ने भनि त्यहाँका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जानकारी गराएका थिए तर उसले म कहाँ कहाँ जिम्मा लिने ? म बोर्डरको जिम्मा लिने कि शहर बजारको लिने कि गाउँघरको लिने कहाँ कहाँको लिने ? भनि जवाफ दिनु भएको थियो । पार्टीका नेताहरुले यस्तो जानकारी गराई सकेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले त्यहाँ सुरक्षा दिएको भए यस्तो घटना हुने थिएन । तर प्रहरी प्रशासनको लापरवाही र लचारी तथा गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ । त्यसैले मेरो विचारमा त्यहाँका प्रहरी प्रमुखमाथि पनि कारवाही हुनुपर्छ ।
केन्द्रमा जुन प्रकारको अन्तरद्धन्द देखिएको छ त्यो खासमा के का लागि हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–पार्टीको जुन विधान छ, विधि छ, त्यसको आधारमा चल्नुपर्छ । पार्टी कुनै एकआध व्यक्तिको इशारामा चल्नु हुँदैन । सबैको अभिमत लिएर सामूहिक प्रणालीबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको छैन । जसको हातमा डाडु पेन्यु छ उसले मात्र आफ्नो भागमा बढी लिइ रहेका छन् । पार्टीको जुन विधान छ, नीति र सिद्धान्त छ त्यसको आधारमा नचलेर यो समस्या भएको हो ।
भन्नाले यो पार्टीको विधि र विधान प्रचण्डले नमानेको हो कि ओलीले ?
–मैले अघि नै सबै कुरा भनि सके । पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनलाई सचिवालय तथा स्थायी कमिटीको बैठकले पारित गरेको छ तर त्यसको आधारमा पार्टी सञ्चालन भइरहेको छेन । दुईजना अध्यक्षका जिम्मेवारी बाँडिएको छ चलेन । तर कसले चल्न दिएन भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । सबैलाई थाह भएकै कुरा हो ।